Fanefana faktiora: Ampiharina ny « facturation par lot » | JIRAMA
Fanefana faktiora: Ampiharina ny « facturation par lot »
Manatsara hatrany ny fandraisana ny mpanjifa ny JIRAMA amin’ny alalan’ny fanamorana ny fanefana faktiora. Hohefain’ny mpanjifa ny volana itsahana ihany ny laniny nandritra io volana io.
Ny fanamaivanana ny filaharana eny amin’ny Masoivoho, amin’ny alalan’ny « facturation par lot » manerana an’i Madagasikara, ihany koa dia isan’ny fanavaozana entin’ny JIRAMA. Amin’ity fomba vaovao fikajiana faktiora ity dia tsinjaraina andiany ny mpanjifa ao amin’ny Direksiona Iraisam-paritra iray ka zarazaraina ao anatin’ny iray volana ny faktiora isan’andiany.
Tanjona ny hialàna amin’ny filaharam-be isaky ny fotoana fanefana faktiora ary ny hizarana ny faktiora mandritra ny volana itsahana.
Amin’ny « facturation par lot » dia ny fandaniana latsaky ny 30 andro no hefaina ao anaty faktiora, mandalo in-droa any an-tokantrano ny « Releveurs » maka ny mariky ny fandaniana ary manatitra ny faktiora afaka telo andro. Tsy misy fiovana fa ao anatin’ny folo andro ihany no hanefana ny faktiora.
Ho an’ny faritra Analamanga, mba hahatomombana ity tolotra vaovao ity dia handalo in-droa ny « Releveurs » amin’ity volana may ity ka ny voalohany dia hanatitra ny faktiora volana aprily sady haka ny mariky ny fandaniana ary ny faharoa kosa hanatitra ny faktiora volana may.
Tsara ny manamarika fa ny mpiasan’ny JIRAMA manatanteraka ny asany dia mitondra « badge » sy mampiseho taratasy maniraka hanatanteraka asa.